काठमाडौँका स्वतन्त्र उम्मेदवारको मत गायब गर्न यस्तो सम्म गर्दै !!! - Compaq News
काठमाडौँका स्वतन्त्र उम्मेदवारको मत गायब गर्न यस्तो सम्म गर्दै !!!
काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना अझै सुरू हुन सकेको छैन। यसअघि मतदान सकिएलगत्तै काठमाडौं महानगरको गणना आजैबाट सुरू हुने भनिएको थियो।
मतगणनाका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजकुमार खतिवडाले सर्वदलीय बैठक राख्ने तयारी गरिरहेका छन्। यसको निम्ति सम्बन्धित सबै राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूसँग आ-आफ्नो प्रतिनिधिको टुंगो गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सुझाएको छ।
मतगणना क्रममा सदर र बदर मत यकिन गर्न दलीय प्रतिनिधिले गणनास्थलभित्रै रहन पाउँछन्।
तर मतगणनामा सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आफ्नो प्रतिनिधि राख्न नपाउने भएका छन्। काठमाडौंका स्वतन्त्र मेयर उम्मेदवार बालेन शाहका सहयोगी कुमार व्यञ्जनकारले आफ्नो तर्फबाट पनि प्रतिनिधि राख्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
‘पाँच जना स्वतन्त्र उम्मेदवार बराबर हामी एक जना प्रतिनिधि राख्छौं भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ,’ व्यञ्जनकारले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामीले पनि एक जना उम्मेदवार बराबर एक जना प्रतिनिधि राख्न पाउनुपर्छ।’
मुख्य निर्वाचन अधिकृत खतिवडाले भने स्वतन्त्रका तर्फबाट धेरै प्रतिनिधि राख्न सकिने अवस्था नरहेको बताए।
‘हामीलाई आयोगबाट आएको परिपत्रमा मतगणनाका दौरान स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूका तर्फबाट बढीमा पाँच जना राख्ने व्यवस्था गर्नू भनिएको छ,’ खतिवडाले भने, ‘सबै स्वतन्त्र उम्मेदवार जम्मा भएर आफैं सहमति गरी पाँच जना एकपटक र अर्कोपटक अर्को पाँच जना बस्ने गर्ने प्रबन्ध मिलाउन भनिएको छ।’
उनले बालेनका तर्फबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूबीच सहमति जुटाउन सके सधैं बस्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने बताए। ‘
उहाँहरूबीच सहमति भएर बालेनका तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि सधैं रहने गर्न पनि सक्नुभयो,’ खतिवडाले भने, ‘धेरै जना स्वतन्त्र भएपछि भीड हुन्छ र बस्ने ठाउँ पनि नहुने भएकाले त्यस्तो परिपत्र भएको हो।’
बालनेका सहयोगीले भने त्यसमा आपत्ति जनाएका छन्।
‘अहिलेको निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा छ। काठमाडौंको भित्री बस्तिमा बालेन र सुमन सायमीको प्रतिस्पर्धा छ। त्यस्तोमा एकअर्काको प्रतिनिधिले सदर/बदर ख्याल नगरिदिन पनि सक्छन्,’ बालेनका अर्का सहयोगीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘ठाउँ मिलाउने जिम्मा आयोगको हो। स्वतन्त्रले पनि प्रतिनिधि राख्न पाउनुपर्छ।’
राष्ट्रिय सभागृहमा हुने मतगणनाअघि केही बेरपछि सर्वदलीय बैठकको तयारी भइराखेको छ।